रेखा र सविनको ‘हिरो रिटर्न्स’ हलमा भयन रिलिज टीभीमा हुदैछ रिलिज
नायक सविन श्रेष्ठ निर्माता रहेको चलचित्र ‘हिरो रिटर्न्स’ निर्माण भएको केही बर्ष भयो । तर, यो चलचित्रलाई हलमा रिलिज गर्न सविनले सकेनन् । यो चलचित्रको प्रदर्शन मिति बैशाखको अन्तिम सातालाई तोकिएको थियो ।तर, लक डाउनका कारण यो चलचित्र निर्धारित समयमा पनि रिलिज हुन सकेन । बारम्बार चलचित्रको प्रदर्शन मिति स्थगित
मनिषाको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ
भारतबाट नेपाल आएकी अभिनेत्री मनिषा कोइराला र उनको परिवार अहिले सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका छन् । केही दिन अगाडि मात्रै रुपन्देहीको बेलहिया नाका हुँदै नेपाल फर्किएकाले मनिषा र उनको परिवारको कोरोना परिक्षण गरिएको थियो । परिक्षणको नतिजा पनि आइसकेको छ । जसमा मनिषा र उनको परिवार सबैमा कोरोना नेगेटिभ आएको
चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्ष बने दयाराम दाहाल
चलचित्र विकास बोर्ड नेपालको अध्यक्ष पदका लागि दयाराम दाहाल छनोट भएका छन् । विकास बोर्डमा सदस्य समेत भइसकेका उनी बिहिबार अध्यक्ष पदको लागि चुनिएका हुन् । बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले लेखक, निर्माता तथा निर्देशक दाहाललाई बोर्डको अध्यक्षको रुपमा नियुक्ति दिएको हो । बोर्ड अध्यक्ष बन्नका लागि दश जना चलचित्रकर्मीले आवेदन
‘प्रेम गीत ३’को ‘हर युग’ले बनायो रेकर्ड !
सन्तोष सेनको निर्माणमा तयार भएको चलचित्र ‘प्रेम गीत ३’ गत वर्ष नै रिलिज हुने पक्का थियो । चलचित्रले यस नयाँ वर्षलाई लक्षित गर्दै गत वर्षको चैत २८ लाई रिलिज मिति तोकेको थियो । तर, कोरोनाका कारण चलचित्र रिलिज हुन पाएन । चलचित्रको प्रचार स्वरुप विभिन्न सामाग्रीहरु सार्वजनिक भइरहेका थिए ।
‘लुट’सँग हारेपछि विस्तापित भएका अर्जुन !
फिल्म क्षेत्रमा चिनिएको नाम हो, अर्जुन कार्की । ‘जंगली मान्छे, दिदि भाई, हाम्रो मिलन कहिले हुन्छ, वरदान, भगवान सबैको’ लगायतका फिल्ममा काम गरेका अर्जुन सफल नायकमा पर्छन् । कुनै समय एक्सन स्टारका रुपमा उनको नाम दर्ज थियो । तर, अहिले उनै अर्जुन कार्मी फिल्म क्षेत्रबाट टाढा छन् । किन फिल्म
खुसीको खबर: नेपाली छोरी मनिषा कोइराला भैरहवा नाका हुँदै नेपाल आइन् !
अभिनेत्री मनिषा कोइराला स्थलमार्गबाट भैरहवा (बेलहिया) नाका हुदै स्वदेश आएकी छन् । लम्पियाधुरासहितको नेपालले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि उनले दिएको प्रतिक्रियालाई लिएर भारतीय संचारमाध्यमले उनलाई विवादमा तानका थिए । मंगलबार बेलहिया नाकाबाट अभिनेत्री मनिषा कोइराला स्वदेश फर्किएको रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थले बताए । उनी आफ्नो बुबा र आमासँगै निजी
मनोजराज सिवाकोटीसँगको दाम्पत्य सम्बन्ध भर्खरै टुटेको थियो । घरबार टुटेको केही दिनमा नै अन्जु पन्त बिरामी परिन् । पिनासबाट सुरु भएको रोग घाँटीसम्म पुग्यो । स्वर सुक्यो । त्यसमा थपियो, माइग्रेन । पछि मिर्गौलामा पनि समस्या आयो । उनी थला परिन् । लामो समय रोगले ग्रसित भएकी अन्जु रोगबाट मुक्ती
पछिल्लो समय नायिका आलिया भट्टको क्रेज बलिउडमा खुबै देखिन्छ । आलिया निरन्तर एक पछि अर्को चलचित्रमा काम गरिरहेकी छिन् । उनी कहिल्यै खाली हात बस्नु परेको छैन । आलिया अभिनित केही चलचित्र छायांकनको क्रममा थिए । प्रेमी रणवीर कपुरसँग स्कृन सेयर गरेको चलचित्र ‘ब्रम्हाश्त्र’ छायांकनको अन्तिम चरणमा थियो । तर,
वरिष्ठ कलाकार जयनन्द चन्द ठकुरीको निधन भएको छ । आइतबार बिहान आफ्नै घर बागडोलमा उनको निधन भएको हो । उनले बिहान ११ बजेर २० मिनेटमा आफ्नो प्राण त्यागेका थिए । जयनन्दको आजै पशुपति आर्यघाटको विद्युतिय शव गृहमा अन्त्येष्टी गरिने चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष रविन्द्र खड्काले बताए । जयनन्द लामो समयदेखि